Lacie diski ike Iweghachite: Olee otú naghachi faịlụ site Lacie Ike diski
Olee otú naghachi faịlụ site Lacie Ike diski
4 .1 Iweghachite HD
4 .2 Mac Draịvụ Iweghachite
4 .3 MacBook Pro Draịvụ Iweghachite
4 .4 iMac Draịvụ Iweghachite
Naa, ọzọ na ndị ọzọ kọmputa ọrụ amasị iji mpụga ike disks dị ka Lacie HDD na-echekwa, nyefee na ndabere faịlụ. Ọ bụ n'ezie a ezi ụzọ na-echekwa oke data, ma ị nwere ike ịga na ọ conveniently, jikọọ ya kọmputa, laptọọpụ na ngwaọrụ ndị ọzọ mfe na a dijitalụ USB. N'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla, i nwere ike ịkọrọ gị photos, fim na ndị enyi na-enweghị mmachi.
Ma e nwekwara ụfọdụ ihe ọjọọ oge. Ị nwere ike ịbịara a nsogbu ụfọdụ ida gị data on Lacie diski ike, dị ka mberede nhichapụ, nkebi format, disk ure na ndị ọzọ na-amaghị ihe. Ọ bụrụ na ị kwadoo gị Lacie diski ike, nke ahụ bụ na ọ dịghị nsogbu n'ihi na ị. Gịnị ma ọ bụrụ na unu adịghị nwere ndabere? Adịghị na-atụle na gị faịlụ e distroyed-adịgide adịgide. Ị ka na nnọọ kechioma, n'ihi na e nwere ihe a ohere maka gị na ị nwere ike naputa furu efu faịlụ na mgbake software.
Naanị otu ihe na ị chọrọ isi na-anya na: Kwụsị eji gị disk ma ọ bụ nkebi ebe ị furu efu oké mkpa data na-echekwa ọhụrụ faịlụ. New faịlụ ga overwrite ochie omume, dekwasịzie ga-eme ka ha unrecoverable.
Olee otú naghachi faịlụ site na LaCie ike disks
Ugbu a, ka-esi n'ime otú naghachi furu efu faịlụ site na Lacie ike diski. Mbụ, mkpa ka i nwere a Lacie diski ike data mgbake ngwá ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị otu, ebe a bụ m nkwanye: Wondershare Data Recovery ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac, nke bụ pụrụ ịtụkwasị obi na nnọọ ọkachamara software. Na ha, ị nwere ike naghachi furu efu faịlụ, gụnyere akwụkwọ, foto, vidiyo, ọdịyo faịlụ na ndị ọzọ, site Lacie diski ike na Windows ma ọ bụ Mac OS, ọ dịghị ajirija. Ka anyị hụ ke edinam n'okpuru.
Download ikpe mbipute nke usoro ihe omume n'okpuru ma na-a free agbalị!
Atụmatụ: Adịghị wụnye ihe omume na otu nkebi ebe ị furu efu data maka ezere overwriting ya.
Ebe a, ka na-agbalị na Windows mbipute a Lacie HDD data mgbake software ọnụ.
Step1 Họrọ a mgbake mode: Ọkachamara & Standard Mode
Mgbe launching Lacie diski ike mgbake software, i nwere ike inwe abụọ mgbake ụdịdị dị ka ndị na n'ihi na gị nhọrọ: Ọkachamara (dị ka a na ndabara) na Standard ọnọdụ.
Ma nke mgbake ụdịdị bụ enyi na enyi na kensinammuo, ha na-arụ ọrụ ahụ dị ka onye ọ bụla ọzọ, naanị na-egosipụta dị iche iche. Ọzọ, ka na-aga na-esote ma na-Ọkachamara dị ka ihe atụ.
Step2 Họrọ faịlụ ụdị ị chọrọ naputa site na Lacie ike diski.
Step3 Họrọ faịlụ ọnọdụ maka mgbake dị ka nkọwa.
Step4 Kwado miri iṅomi ma Malite, ma ọ bụ i nwere ike ikwu na ọ bụrụ na gị na disk bụghị e Ị.
Step5 Preview furu efu faịlụ na Lacie HDD na-agbake ha na ala.
IHE: Mgbe agbake faịlụ, adịghị azọpụta ha na otu nkebi ebe ị furu efu ha n'ihu. Họrọ ọzọ nkebi ma ọ bụ disk na-echekwa ha. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi faịlụ ka e mesịrị mgbe Doppler, cheta ịzọpụta Doppler N'ihi na i nwere ike ozugbo naghachi ha site importing ya, kama rescan.
Olee otú Naghachi Data si Toshiba Ike diski
Olee otú naghachi faịlụ site Iomega Ike diski
> Resource> Draịvụ> Olee otú iji naghachi faịlụ site Lacie Ike diski